Ny voankazo kiriodana dia raisina ho voangona amin'ny volana Mey sy Jona, rehefa mibontsina sy manidina jas. Na dia ny tsirikazo mena aza dia manana tsiro mani-pofona, izay hazavaina amin'ny habetsaky ny asidra atolotra, izay manana toetra mahasoa ho an'ny vatan'olombelona. Kiraro be dia be no ampiasaina mba hisorohana ny aretina maro sy ny fatiantoka.
Cherry - mahasoa sy ratsy
Cherry ao amin'ny firafetany dia manana vitamina maro izay manampy ny rafi-panafody, ny fiarovana. Ny vitamina C izay misy ao aminy dia misy lafiny maro amin'ny toetra mahasoa: mandray anjara amin'ny famokarana ny sela, mampitombo ny rindrin'ny tosidra, manatsara ny elastika amin'ny hoditra, manatsara ny fanoheran'ny vatana amin'ny mikraoba, ary manatsara ny ivoara sy ny asany.
Cherry dia manankarena vitaminina tsy fahita firy, izay ilaina amin'ny famokarana hormones vehivavy. Raha ao anatin'ny vatan'ny vehivavy io vitaminina io, dia manana hoditra marevaka tsara izy, mihalehibe ny volony.
Ny kirihitra dia misy vitaminina ny vondrona B, izay manana toetra mahasoa ho an'ny olombelona. Ohatra, ny B1 dia manatsara ny fiasan'ny rafi-pitabatabana ary manakana ny fiterahana ny sela nerveau, ny pyridoxine (B6) mavitrika tena ilaina dia ilaina amin'ny famokarana serotonine, izay manome hatsarana tsara.
Ny berry cherry dia manankarena amin'ny singa mineraly, izay mahasoa ny taova sy ny rafitra maro. Noho izany, ny vy, misy voankazo sarobidy, dia tena ilaina amin'ny rafitry hematopoietika. Ny magnesium sy ny potassium dia manatsara ny asan'ny fo, izany hoe manohana ny asan'ny knee CA. Misy calcium ao amin'ny kerobima - tsy ilaina amin'ny fitomboan'ny taolana ihany, fa koa mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny fikorontanan'ny nerlandana amin'ny tavy. Ny iray amin'ireo singa manan-danja ao amin'ny berry dia iodine - izy io dia manara-maso ny fiasan'ny tosiky ny tiroida, ary misy antiseptika koa.
Ny rafi-kery dia mila iodine, calcium, fluoride mba hananganana antikora, izany hoe, sela manokana miady amin'ny aretina. Izany no mahatonga ny ririnina ho tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe hisotro be dia be.
Na dia eo aza ny karazana voankazo voaroy, dia tsy tokony hanadino fa misy mpiangona maloto iray - ny pigment fanangonam-bolo izay atahorana haingana ao anaty ra ary mivelatra manerana ny vatana. Raha misy olona tezitra amin'ny tsy fahampiana, dia mety hiteraka fihetseham-po miverimberina izany ary miseho mihintsy, hyperemia ary mangatsiaka be.
Tsy afaka mandany serizy maro be amin'ny olona voan'ny hidy amin'ny asidra avo be ianao. Ny voka-dratsin'ny sotro kesika dia misy fiantraikany amin'ny moka amin'ny tsindry marefo amin'ny colitis.
Cherry ho an'ny fahavoazana
Ny tsimokaretina dia ampiasaina betsaka amin'ny voankazo mena rehetra, ary ny serizy dia tsy misy ankoatra. Ny voankazo mamelana dia ahitana asidra maro be izay ilana lanjany. Ny asidra folakin'ny jiro kiriodra dia manosika ny metabolism tsara kokoa, ny fizarazaran'ny sela ary manampy amin'ny fananganana asidra nokleary.
Ao amin'ny firafitry ny kirizy dia be ny vitaminina PP, izany hoe, ny asidra nicotinic, manasitrana ny metabolismana , mamoaka angovo avy amin'ny fivarotana matavy ary manampy amin'ny fampihenana ny lanjany.
Cherry dia vokatra mahasoa rehefa very maina ihany koa satria misy varimbazaha vita amin'ny varahina, izay manelingelina ny dingam-pamokarana ao amin'ny vatana. Ny metaly mifamatotra amin'ny vy dia mandray anjara amin'ny famindrana ny oksizenina mankany amin'ny cellules peripheral, ary ny sela mahazatra "miaina" dia tsy voavolavola amin'ny fanangonam-bolo, ny oksizidy, ny lipida dia miova ho hery.
Ao amin'ny dite ho an'ny fatiantoka mavesatra, ny ravina sy ny tsilo dia ampiasaina matetika, ity zava-pisotro ity dia manampy amin'ny fanesorana ranon-dra, mba hanadiovana ny vatan'ny toaka sy ny poizina. Ny fitambaran'ny mofomamy misy dite dia mifehy ny metabolisma ao anaty sela.
Poakazo tsara dia tsara sy ratsy
Ny ranon'i Sassi - ahoana no tokony hosotroina?
Inona avy ny akondro?
Ny rano artesian dia tsara sy ratsy
Physalis - toetra mahasoa
Ny soa azo avy amin'ny nectarine
Firy isan-taona ny ronono?
Rano misy ranomandry
Sakafo ho an'ny fahavoazana
Fihaonana: ilay raim-pianakaviana tsara indrindra amin'ny zanakavavy ao amin'ny Internet!
Diet Kovalkov - sakafo
Salady misy cayenne sy sausage
David Beckham dia milomano miaraka amin'ny mpankafy
Peach fitafy amin'ny gorodona
Ny hamafin'ny ankizy
Biparietal lehibe amin'ny lohan'ny foetus - latabatra
Volana fanangonam-bokatra Chanel 2014
Photoshoot any an-dranomasina
Mamy miaraka amin'ny tsaramaso sy tongolo lay
Mitsangàna amin'ny penina
Mandingana ho an'ny ankizy efa ho 6 volana
Sarimihetsika mikasika ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana
Bitsibitsika amin'ny fotoana rehetra
Rings vita amin'ny platinum